Eny ， ny MOQ dia miankina amin'ny zavatra.
Ny entana ankapobeny MOQ dia 2000do, mazava ho azy, raha manana fangatahana manokana ianao na mila habe kely hanaovana fanadinana, pls ifandraisanay ny varotrao ho an'ny vahaolana.
Afaka mamatsy ve ny santionany? Lafo ve sa maimaim-poana? Inona ny fotoana fandefasana.
Valiny: Eny, tianay ny manome santionany araka ny fangatahanao.
Ireo santionany amin'ny ankapobeny dia maimaim-poana ho an'ny 2-3pairs isaky ny modely. Ny fotoana mitarika 2-3days.
Raha mila ny namboarina manokana toy ny akora manokana, ny santionany, na misy logo na hafa.
dia hiankina amin'ny vidiny izany, ny fotoana fitarihana izay tokony ho amin'ny 5-7 andro.
Afaka miaraka amin'ny sary famantarana antsika ve ny vokatra?
Eny, ekena ny fonosana natao manokana toy ny fanaovana pirinty, fanasan-damba, fonosana OPPbag tokana, takelaka, marika baoritra na hafa.
Manana ny traikefan'ny tsenantsika ve ianao?
Miaraka amin'ny traikefa 10000 mahery, ny mpanjifa manarona firenena 26. Noho izany azoko antoka fa hanome fanampiana anao amin'ny tsenanao ianao.
Manana fanamarinana CE ve ianao?
Eny, manana fanamarinana CE izahay ho an'ny modely sasany, pls jereo izany amin'ny serivisy fivarotana ho azy.
Manana marika manokana ve ianao?
Eny, ny marika manokana ZTHPOWER®
Ho an'ny famokarana faobe dia 20-30 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Manjary mandaitra ny vanim-potoana ireo rehefa 1) nahazo ny famandrihana nataonao ianao, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao ianao. Raha toa ka tsy mandeha amin'ny fe-potoana voatondro ireo loham-pianaranay dia midira azafady amin'ny varotrao. Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome ny zavatra ilainao izahay. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia afaka manao izany isika.
TT, Western Union, Paypal, D / P eo imasony. Ny voarainay handoa vola dia tokony hatao.
Amin'ny alàlan'ny TT, ny fametrahana 30% mialoha, ny fifandanjana 70% manoloana ny kopin'ny B / L no nofidin'ny ankamaroan'ny mpanjifa. .
Azonao antoka ve ny fanomezana vokatra azo antoka sy azo antoka?